I-Oro Agri Europe - Isayensi Inikwe Amandla Ngemvelo
I-Oro Agri International
I-Oro Agri Europe
Guqula imenyu yokuhambisa
Umanyolo / Amantongomane
Umhlahlandlela Wenkampani 2021
Umhlahlandlela Wezitshalo Ovikelwe
Incwajana eyi-FAQ ye-OROBAC ™
Umhlahlandlela Wemiphumela Yokuhlolwa Kwamazambane
Pome Izithelo Isicelo Umhlahlandlela
Umhlahlandlela Wemiphumela Yokuhlolwa Kwamagilebhisi
Amaphrojekthi we-R & D / Projetos de I&D
Umshini wokuwasha we-OSB-OXIDE ne-Biocide
I-Cleistothecia Monitoring 2019
I-Cleistothecia Monitoring 2018
Izindaba / Cindezela
I-TRANS PerformER® FAQ
Imibuzo evame ukubuzwa ye-WETCIT ™
IMIBUZO EVAME UKUBUZWA K26 ™
Isisekelo sedatha yesilingo
Umsebenzi wethu ukuletha ngokuqhubekayo izivikelelo zezitshalo ezintsha nezithandekayo futhi nezixazululo ezithuthukisa isivuno emakethe.
Amaphrojekthi axhaswe ngemali yi-EU:
Ukondla Umhlaba Ngokuqanjwa Namandla
Sithuthukisa imikhiqizo ephephile kumsebenzisi nendawo ezungezile futhi sinikeza isisombululo esisebenzayo esisalele kumakhasimende ethu.
Bona imikhiqizo yethu
Ngemodi eyingqayizivele yezenzo nezindlela zokusebenzisa ngokunemba imikhiqizo yethu isetshenziswa ngokuya ngeziqondisi zakamuva kakhulu ukuze isebenze kahle, kepha iphephe imvelo. Ukwazi kabanzi, vakashela isigaba se-FAQ sethu.
Bona isigaba sethu se-FAQ
Ukuhlolwa kwezakhiwo ngokusetshenziswa kokuwa kwesakhiwo esiqukethe uwoyela obalulekile okhishwe ku-sinusis we-citrus ukunciphisa ukuthuthukiswa kwe-erysiphe necator cleisthotecia
Bona amaphrojekthi ethu
Ngama-R&D namaqembu wokusekelwa kwezinsizakalo zobuchwepheshe asuselwe eYurophu nasemhlabeni wonke sihlala sifuna imikhiqizo emisha engathuthukisa isivuno futhi isekele impilo yezilimo.
Bona amavidiyo ethu
Ukutshalwa kwemali kwe-Continuos R&D
Singumhlinzeki kaNdunankulu wezixazululo eziphephile, ezinemvelo, zokuvikela izitshalo kanye nezisombululo zokuphucula isivuno ezimakethe zomhlaba wonke zezolimo kanye nabathengi.
I-Oro Agri International Ltd (ngaphansi komkhiqizo wethu i-ORO AGRI) ithuthukisa futhi yenze imikhiqizo enelungelo lobunikazi yezicelo zezolimo, ezasekhaya nezimboni emhlabeni jikelele. Sisebenza ngokukhethekile emikhiqizweni ephephile kumsebenzisi nakwimvelo futhi ezohlinzeka ngesixazululo esisebenzayo, nokho esingenazinsalela kumakhasimende ethu.
Isayensi Inikwe Amandla
Qhubeka nezindaba zakamuva eziphathelene nenkampani yethu nemikhiqizo ephephile kumsebenzisi nendawo ezungezile futhi inikeze isisombululo samahhala esisebenzayo kodwa esisalele kumakhasimende ethu.
Sisebenza ngokukhethekile emikhiqizweni ephephile kumsebenzisi nakwimvelo futhi ezohlinzeka ngesisombululo samahhala esisalelayo kumakhasimende ethu. Izigaba zomkhiqizo zifaka ama-adjuvants, izibulala-zinambuzane, izimo zenhlabathi or ama-foliar feeds.
Ochwepheshe bethu bezinkambu benza izifundo eziphathelene nokusebenza ngempumelelo kwabatshali bendawo futhi basize abasabalalisi ngezinhlelo zokuqeqesha ukufundisa umphakathi wezolimo mayelana nokusebenzisa i-ORO AGRI uhla lomkhiqizo.
I-PREV-AM® yonke-in-one insecticide, fungicide kanye ne-acaricide
I-OROGANIC ™ Isingeniso
ISITOLO SESITOLO SOSHINTSHA WE-Soans
Umhlahlandlela Wokusiza Izinambuzane Nezibungu
Ozakwethu Bokusebenza be-ORO AGRI
Ukubandakanya ukubambisana ngamasu kubalulekile ekusisizeni ukuthi sandise izixazululo esizinika abalimi emhlabeni jikelele. Ozakwethu abasebenzayo banikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene ezisisiza ngokuqhubekayo ukuletha izixazululo ezintsha emakethe. Lezi zinsizakalo zifaka phakathi isitifiketi, ukuqeqeshwa, ucwaningo kanye nabezindaba. Siphinde sibe nozakwethu abasebenzayo ababandakanyeka ekuthuthukisweni kwezindawo zasemakhaya nezomphakathi, okusebenzela ekwenzeni ulwazi nesayensi kufinyeleleke kubo bonke. Silokhu sandisa inethiwekhi yethu yokubambisana futhi samukela noma ngubani osisizayo ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu isetshenziswa ngendlela efanele futhi efanelekile ngabalimi, ukuvikela izitshalo zabo kanye nemvelo.
Umhlinzeki uNdunankulu wezinkinga eziphephile, ezinemvelo, zokuvikela izitshalo kanye nezisombululo zokuphucula isivuno ezimakethe zomhlaba wonke zezolimo kanye nabathengi.
I-Oro Agri International Ltd (ngaphansi komkhiqizo wethu i-ORO AGRI) ithuthukisa futhi yenze imikhiqizo enelungelo lobunikazi yezicelo zezolimo, ezasekhaya nezimboni emhlabeni jikelele. Sisebenza ngokukhethekile emikhiqizweni ephephile kumsebenzisi nakwimvelo futhi ezohlinzeka ngesixazululo samahhala esisebenzayo, kepha esisasele kumakhasimende ethu.
Kokubili, ukufinyelela kwethu emakethe nohla lwemikhiqizo selukhulile futhi manje lukhona emazweni ayisishiyagalombili nesikhombisa emhlabeni jikelele.
I-ORO AGRI Group ikhiqiza kumazwekazi amane ahlukene anezimboni e-USA, eBrazil, eNingizimu Afrika nasePortugal manje.
I-ORO AGRI Group inobuchwepheshe obunikazi obunikazi obuningana. Ucwaningo lwethu luhlala lugxile ekutholeni izinhlelo zokusebenza ezintsha zobuchwepheshe bethu.
Khetha ukusatshalaliswa emazweni angaphezu kwama-85 emhlabeni jikelele. Abathengisi noma abathengisi abangaphezu kuka-2,000 180+ abathengisa imikhiqizo ye-ORO AGRI emhlabeni jikelele. Abasebenzi abayi-23 abasemazweni angaphezu kwangama-XNUMX.
Ubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi
Amaqembu e-R & D kanye neTechnical support support ezinze eNingizimu Afrika, eBrazil, e-United States nase-Europe. Amalabhorethri Wokwakha Nentuthuko ePortugal, eBrazil, eNingizimu Afrika nase-United States.
Sakha futhi sakha imikhiqizo enelungelo lobunikazi, futhi sigxila emikhiqizweni ephephile kumsebenzisi nakwimvelo futhi sinikeza isixazululo samahhala esisebenzayo, nokho esisele kumakhasimende ethu.
Isayensi Inikwe Amandla Yi-Nature®
I-Oro Agri Europe SA
Umasipala wase-Estrada 533, Estrada do Lau
I-Oro Agri International BV
Ingqungquthela ye-Global BioControl 2021
Kwethulwa i-OROBAC ™ 100
Ukubhaliswa / ukugunyazwa okusha
I-OROMATE K26® egunyazwe eFrance yi-ANSES
I-copyright 2021 © ORO AGRI Europe. Wonke Amalungelo Agodliwe.
Sisebenzisa amakhukhi ukukunikeza ngesipiliyoni sokuphequlula, ukuhlaziya ithrafikhi yesayithi, nokwenza okuqukethwe kube ngokwezifiso zakho. Funda mayelana nokuthi sisebenzisa kanjani amakhukhi nokuthi ungawalawula kanjani ngokuchofoza "Okuthandwa Yobumfihlo." Uma uqhubeka nokusebenzisa le sayithi, uyavuma ukusetshenziswa kwethu kwamakhukhi.
Isikhungo Sokukhetha Ubumfihlo
Amakhukhi wokuhlaziya nokwenza ngokwezifiso
Siyabonga ngokuvakashela iwebhusayithi ye-ORO AGRI futhi ubuyekeze inqubomgomo yethu yobumfihlo. Inqubomgomo yethu yobumfihlo ilula: asiqoqi lwazi lomuntu siqu ngawe uma uvakashela iwebhusayithi yethu ngaphandle kwekheli le-IP ongena kulo ukuze likudlulisele endaweni ethile yemikhiqizo yethu. Lokhu kwenziwa ukuze kube lula kuwe. Nansi indlela esilusingatha ngayo ulwazi olumayelana nokuvakasha kwakho kwiwebhusayithi yethu: imininingwane eqoqiwe yagcinwa ngokuzenzekelayo Iseva yewebhu ye-ORO AGRI ayiqoqi noma igcine noma iluphi ulwazi oluzenzakalelayo nganoma yisiphi isicelo se-http esitholiwe. Siyaliqaphela ikheli lakho le-IP ukuze ususe kabusha umsebenzisi wegunya elithile ekhasini lewebhu elifanele. I-E-mail E-mail efakwe ku-ORO AGRI itholakala kwi-akhawunti yebhokisi le-imeyili exhunywe ku-info@oroagri.com noma ku-legal@oroagri.com kodwa ayigcinwa nhlobo kuseva yewebhu. Ukusetshenziswa kwamakhukhi aqhubekayo kanye nobuchwepheshe bokulandelela Asisebenzisi amakhukhi aqhubekayo noma ubuchwepheshe bokulandela obuphikelelayo, njengalawo asetshenziselwa ukwenza ngezifiso isikhathi sokubuyisela izivakashi, kuwebhusayithi yethu. Lapho iseshini yakho isiqediwe, ikhukhi iyanqamuka. Uma unemibuzo noma ukukhathazeka, sicela uxhumane nathi ekhelini lethu le-imeyili legal@oroagri.com
Lawo makhukhi adingeka kakhulu ukukunikeza ngezinsizakalo ezitholakala kumawebhusayithi ethu nokusebenzisa ezinye izici zawo, njengokufinyelela ezindaweni eziphephile. Ngoba la makhukhi adingeka kakhulu ukuletha amawebhusayithi, awukwazi ukuwenqaba ngaphandle kokuthi ube nomthelela ekutheni amawebhusayithi ethu asebenza kanjani. Ungawavimba noma uwasule ngokushintsha izilungiselelo zesiphequluli sakho, njengoba kuchazwe ngaphansi kwesihloko esithi "Ngingawalawula kanjani amakhukhi?" esitatimendeni sekhukhi.
gdpr [kuvunyelwe_cookies], gdpr [imvume_types], wc_cart_hash_ #, wc_fragments_ #
Lawo makhukhi aqoqa imininingwane esetshenziswa noma yifomu ehlanganisiwe ukusisiza siqonde ukuthi amawebhusayithi ethu asetshenziswa kanjani noma asisize ukwenza ngokwezifiso amawebhusayithi ethu ukuze uthuthukise isipiliyoni sakho.
_ga, _gat, _gid, ukuqoqa
Le khukhi isetshenziselwa ukuthumela idatha kuGoogle Analytics emayelana nedivayisi nokuziphatha. Ilandela isivakashi kuwo wonke amadivayisi neziteshi zokukhangisa. Le khukhi isetshenziselwa ukwenza imilayezo yokukhangisa ukuthi ihambisane kakhulu nawe nezintshisakalo zakho. Iphinde yenze imisebenzi efana nokuvikela isikhangiso esifanayo ukuthi siphinde sivele futhi, siqinisekise ukuthi izikhangiso zikhonjiswa kahle, futhi kwezinye izimo sikhetha izikhangiso ezisuselwa kuzintshisakalo zakho.
r / ukuqoqa